ခိုးရာခုအန်း ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
ဂျပန်နာမည်ကြီး ပန်းခြံ ၃ခုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အဲဒိုခေတ်ရဲ့ အသွင်အပြင်တွေ ကျန်ရှိတဲ့ လှပတဲ့ ဂျပန်ပန်းခြံဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီအလိုက် ပြောင်းလဲတဲ့ သစ်ပင်တွေနဲ့ ပန်းတွေနဲ့ ဂျပန်ရဲ့အာရုံခံစားမှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ ရှုခင်းတွေကို ပျော်ရွှင်ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ပန်းခြံအတွင်းမှာ ကြိုးကြာငှက်တွေ မွေးမြူထားပြီး နှစ်တိုင်း ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မှာ အနီရောင်ကြိုးကြာတွေ ပျံသန်းသွားကြတယ်။
Okayamaken'okayamashi Kitaku Kōrakuen 1 - 5
လူကြီး ၁၅နှစ်မှ ၆၅နှစ် အတွင်း ( အလယ်တန်းကျောင်းသား မပါ ) ၄၀၀ယန်း
ကလေး ( မူလတန်း. အလယ်တန်းကျောင်းသား ) ၁၄၀ ယန်း
၆၅ နှစ်အထက် ၁၄၀ ယန်း
မတ်လ ၂၀ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၇း၃၀ မှ ၁၈း၀၀
အောက်တိုဘာလ ၁ရက် မှ မတ်လ ၁၉ ရက် ၈း၀၀ မှ ၁၇း၀၀
မိုမိဂျိအချိန်မှာ မီးထွန်းအလှဆင်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ မီရှယ်လင်း. ဂရင်းဂိုက် . ဂျပွန် မှာ ကြယ်သုံးပွင့် ရထားပါတယ်။
JR ( okayamaဘူတာ ) မှ ၂၅ မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်
JR ( okayamaဘူတာ )မှ အိုခဒန်း ဘတ်စ်ကား ဖူဂျိဟာရဒန်းချိ သွားတဲ့ ကားစီး ၊ ( Kōrakuen ရှေ့ ) ဆင်း